पैसा तिर्ने एमाले, नाम राख्ने माओवादीको ? | My News Nepal
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जति नै ठूला कुरा गरेपनि दुई ठूला दल एमाले–माओवादी केन्द्रको पार्टी एकीकरण भताभुङ्ग भएको छ । एमालेका नेताहरूले माओवादी केन्द्रलाई होच्याएर बोर्डमा ‘माके’ शब्दावली लेखेपछि माओवादीका नेताहरू आक्रोशित भएका हुन् ।
एमालेले होच्याएर ‘माके’ भनेर बोर्डमा लेखेको आक्रोश वैशाख ९ गते राष्ट्रिय सभागृहमा देखियो । एमालेले बनाएको बोर्डमा पुष्पलाल, मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीको मात्रै तस्बिर राखेर दुई छेउमा ओली र प्रचण्डको तस्बिर राखिएको थियो ।
हुन पनि एमालेले माओवादीलाई भाउ दिने कुरै थिएन । किनभने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले राष्ट्रिय सभागृह एमालेलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएका थिए ।
जबकी राष्ट्रिय सभागृहको भाडा मात्रै एक लाखको हाराहारीमा पर्छ । वैशाख ९ गतेको कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय सभागृहको रजिष्टरमा मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको कार्यक्रम भनेर लेखिएको थियो । यो भनेको एमालेले पैसा दिनुपर्दैन भनेको हो भनेर एक कर्मचारीले बताए ।
कार्यक्रमस्थलमा कार्यकर्तातहमा जस्तो द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना भयो, त्योभन्दा ठूलो द्वन्द्व राष्ट्रिय सभागृहभित्र अतिथिहरूका लागि बनाइएको भिभिआइपी कक्षमा ओली र प्रचण्डबीच भएको थियो । दुई जनाबीचको द्वन्द्व र बाझाबाझका कारण झण्डै आइतबारको कार्यक्रम नै स्थगित हुन पुग्यो । लेनिनको फोटो नहुनु र कार्यक्रमका लागि बनाइएको बोर्डमा एमालेका दिबंगत नेताहरूको मात्र फोटो राखिएको विषयले नारावाजी सुरु भएपछि माओवादी पंक्तिले अध्यक्ष प्रचण्डलाई जानकारी गराइसकेको थियो ।
त्यहाँ सिर्जना भएको रडाकोबारे ओली अनविज्ञ थिए । त्यसैले, उनी कार्यक्रमस्थल पुगे । ओली कार्यक्रमस्थलमा पुगेको जानकारी पाएपछि प्रचण्ड पनि राष्ट्रिय सभागृह पुगे । ओली लगायत संयोजन समितिका सदस्यहरू रहेको भिभिआइपी कक्षमा गए, ओलीलाई भेटे । प्रचण्डलाई देख्नासाथ ओलीले आक्रोस पोखे, ‘त्यो बोर्ड किन निकालियो ? त्यही ब्यानर नराख्ने हो भने कार्यक्रम हुँदैन । म हिँड्छु ।’ विवादास्पद बनेको त्यो बोर्ड ओली राष्ट्रिय सभागृहमै रहेका बेला निकालेर भुइँमा राखिएको थियो ।
ओलीले प्रचण्डसँग चित्त दुखाए, ‘पुष्पलालको फोटो भुइँमा राखेर म कसरी भाषण गर्नसक्छु ? मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीको अनुहार देख्दा तपाईंहरूलाई किन रिस उठ्छ ?’
ओली आक्रोसित रुपमा पेश भएपछि प्रचण्डपनि त्यही शैलीमा प्रस्तुत भए । ‘संयुक्त कार्यक्रम भनेपछि त्यसै अनुसार गर्नुपर्छ ।
एमालेका नेताहरूको मात्र तस्वीर राख्ने हो भने तपाईंहरू नै आयोजक बनेर हामीलाई अतिथिको रुपमा बोलाएको भए भइहाल्थ्यो’, प्रचण्डले भने, ‘कार्यक्रम संयुक्त भन्ने, अनि एकपक्षीय रुपमा गर्न खोज्ने ?’ प्रचण्डको जवाफ सुन्नासाथ ओलीले भने, ‘त्यसो भए कार्यक्रम नगरौं।’ यसो भन्दै ओली उठे । ओली उठेपछि प्रचण्डपनि उठे । ओली प्रचण्डबीच बाझाबाझ चलिरहेको बेला उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बोर्ड निकाल्ने काम माओवादी पक्षबाट नभई एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले निकालेको जानकारी ओलीलाई दिएका थिए ।
पुनले कार्यक्रम भाँडिए अप्रिय स्थिति सिर्जना हुने र संयोजन समितिको त्रुटिका कारण त्यो परिस्थिति सिर्जना भएको बताउँदै छुट्टै बोर्ड बनाएर कार्यक्रम गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका थिए । त्यसपछि बरिष्ठ नेता नेपालले कार्यक्रमस्थलमा रहेको बोर्डलाई यथावत राखेर माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अर्काे बोर्ड बनाएर ल्याएपछि कार्यक्रम सुरु गनुपर्ने प्रस्ताव राखे । त्यसमा सबैले सहमति जनाए । त्यसपछि माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव प्रल्हाद बुढाथोकीलाई बोर्ड बनाएर ल्याउन भनियो । करिव ३ घण्टापछि बोर्ड बनाएर ल्याइयो र कार्यक्रम सुरु भएको थियो । यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकमा खबर छ ।